ဝန်ထမ်း အခွင့်အရေးနဲ့ Google က ရတဲ့ သင်ခန်းစာ | mmshare
သင်ဟာ လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ဆိုရင် ပထမဆုံး ဂရုစိုက်ရမှာက သင်နဲ့ အနီးဆုံးသူတွေ ဖြစ်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဝန်ထမ်းတွေပါပဲ။ သင်နဲ့ အနီးကပ်ဆုံး ဝန်ထမ်းတွေကို ဂရုစိုက်မယ်ဆိုရင် သင့်ဝန်ထမ်းတွေကလည်း သူတို့နဲ့ အနီးကပ်ဆုံး ဆက်ဆံနေရတဲ့ စားသုံးသူ (Customers) တွေကို ဂရုစိုက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Google UK က မန်နေဂျာတစ်ယောက်က အခုလို ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ လုပ်ငန်းစသဘာဝနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဖို့ လူရှာရတဲ့ အလုပ်ဟာ သိပ်တော့ လွယ်ကူတဲ့ အလုပ် မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဝန်ထမ်းအသစ်တွေကို ငှားတဲ့အခါမှာ အထူးဂရုစိုက် ရွေးချယ်လေ့ ရှိသလို၊ ရှိပြီးသား ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း ပျော်အောင် ထားပါတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ လူကောင်းတစ်ယောက် ရဖို့၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကောင်း တစ်ယောက် ရဖို့ မလွယ်ဘူး ဆိုတာ လူတိုင်း သဘော ပေါက်ကြ ပါလိမ့်မယ်။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကတော့ Google က သူ့ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ရွေးချယ်ပုံနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ပေးထားတဲ့ အခွင့်အရေးတွေထဲက အချို့ ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အမြဲတမ်း သူများဆီမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီတော့ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းတွေ လုပ်တဲ့အခါ အခုလို အောင်မြင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကို အတုယူသင့်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်း အသစ်တွေအတွက် အင်တာဗျုးတဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနရဲ့ မန်နေဂျာ၊ အဲဒီသူနဲ့ အတူတွဲလုပ်ရမယ့် အထက် စီနီယာ၊ အောက်က ဂျုနီယာ တွေက ဝိုင်းပြီး အင်တာဗျုးပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဝန်ထမ်းအသစ်နဲ့ ရှိရင်းစွဲ ဝန်ထမ်းတွေဟာ အလုပ် အတူမလုပ်ခင် ကတဲက တစ်ယောက် အကြောင်း တစ်ယောက် ပိုသိနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကို ရစေပါတယ်။
ဝန်ထမ်းတွေ အားလုံး အတွက် နှစ်တိုင်း လက်ဆောင်ကောင်းကောင်း တစ်ခုစီ ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။
အချိန်မရွေး စားသုံးနိုင်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာအားလုံးကနေ ပေ ၁၀၀ အတွင်းမှာ ထားပေးပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဘာမှ ပေးစရာ မလိုပါဘူး။ အားလုံး Free ပါ။
နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်တဲ့အခါ အကန့်အသတ်မရှိ နားလို့ ရပါတယ်။ (Unlimited sick leave)
ဝန်ထမ်းတွေ အချင်းချင်း တွေ့ဆုံပွဲတွေကို သောကြာနေ့တွေမှာ လုပ်လေ့ရှိပြီး အများအားဖြင့် အဲလို ပွဲတွေမှာ အရက်လည်း ပါပါတယ်။
အလုပ်ချိန် အတွင်းမှာ ဝန်ထမ်းတွေဆီက လုပ်အားကို 70% ပဲ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဝန်ထမ်းအားလုံးဟာ သူတို့ အလုပ်ချိန်ရဲ့ 20% ကို မိမိတို့ စိတ်ဝင်စားရာ တခြား သုတေသနလုပ်ငန်းတွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုခွင့် ပေးထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဝန်ထမ်းတွေဟာ အလုပ်ဝင်ပြီး ပထမ တစ်နှစ်မှာ အပန်းဖြေခရီး (Vacation Days) ထွက်ဖို့ ၁၅ ရက် ခွင့်ရပါတယ်။ လေးနှစ်ကြာပြီးတဲ့ နောက်မှာ ခွင့်ရက် ၂၀ ရက်၊ ခြောက်နှစ် နောက်ပိုင်းမှာ ခွင့်ရက် ၂၅ ရက် အထိ ခံစားခွင့်တွေ ရှိကြပါတယ်။
ပြီးတော့ အားလပ်ရက် (Holidays) အဖြစ် တစ်နှစ်မှာ ၁၂ ရက် လစာအပြည့်နဲ့ ရပါသေးတယ်။
အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်ရပြီး ခံစားခွင့်နဲပါးတဲ့ အလုပ်၊ အထက်လူကြီး သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်အားနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို အသိအမှတ် မပြုတဲ့ အလုပ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အချင်းချင်း မညီညွတ်တဲ့ အလုပ်တွေမှာ ဝန်ထမ်းတွေ မမြဲမှာ သေချာပါတယ်။
သင်ဟာ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဒီလို အခွင့်အရေးတွေပေးဖို့ စိတ်ဝင်စားချင်မှ စိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်လည်း ပိုပေးကောင်း ပေးနေပါလိမ့်မယ်။
အဓိကကတော့ ဝန်ထမ်းတွေဆီက ရလာတဲ့ လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ပြန်ပေးရတဲ့ အခွင့်အရေး မျှတ နေဖို့ပါပဲ။
သင်က အလုပ်ရှင်ဆိုရင် အဓိက လုပ်ဆောင်ရမှာက ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေကို အထူး ဂရုစိုက်ဖို့ပါပဲ။
Wed, 10/23/2013 - 21:57
Can't read unicode
I can't read mm unicode font in my computer and requested to help for me please how to fix this issue.
Sat, 11/09/2013 - 10:58
Please install at least one Myanamr Unicode
You have to install at least one Myanmar unicode font into your machine. http://www.myanmarlanguage.org/category/post-tags/download
Then you will see the unicode characters.